Munaasabad lagu xusayey 1-da Luuliyo oo uu soo qabanqaabiyey Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Maanta lagu qabtay Hoteel Safaari ee Magaalada Muqdisho, Musharaxa oo soo dhoweeyay in wadahadal lala galao Somaliland inuu muhiim yahay balse uusan noqon karin qudbosiro!! Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Munaasabad lagu xusayey 1-da Luuliyo oo uu soo qabanqaabiyey Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Maanta lagu qabtay Hoteel Safaari ee Magaalada Muqdisho, Musharaxa oo soo dhoweeyay in wadahadal lala galao Somaliland inuu muhiim yahay balse uusan noqon karin qudbosiro!! Munaasabad si heersare ah loo agaasimay laguna maamuusayey Maalinta xornimada iyo Midnimadda Soomaaliya 1-da Luuliyo ayaa maanta lagu qabtay Hoteel Safaari ee magaalada Muqdisho, Xafladaan oo ay kasoo qeyb galeen dad kor u dhaafaya 500 oo qofood oo isguna jira Siyaasiyiin , Xildhibaano, Oday dhaqameedyo , aqoonyahano, Dhalinyaro, haween iyo dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa la sheegay inuu soo qabanqaabiyey Musharaxa Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo halkaasi ka jeediyey qudbad aad u qiimo badan oo ku saabsaneyd muhiimadda Xornimada iyo sida ay muhiimka u tahay in aanu ilaashano, Musharaxa ayaa sheegay in xornimadaan dadkii hormuudka ka ahaay ay ahaayeen 13 dhalinyaro ah oo aan qabiil lug ku laheyn balse ahaay wadaniyiin Soomaaliyeed. Musharaxa oo sii wata qudbadiisa ayaa sheegay in ay muhiim tahay Soomaaliya iyo Somaliland inay wadahadlaan balse inaysan ahayn in wadahadalada lala gelayo Somaliland inay qudbasiro noqdaan, wadhadalaasi uu sheegay in siyaasiyiinta Soomaaliya ay ka qeyb galaan.
Sidoo kale waxaa halkaasi qudbo qiimo leh ka jeediyey Dr Cabdullahi Sheekh Daahir oo ah Gudoomiye ku xigeenka Xisbiga Nabada isaga oo sheegay in maanta oo ah 52 guurada Maalinta Xornimada iyo Midnimada Soomaaliya ay tahay maalin naga mudan qadarin weyn, Dr cabdulaahi ayaa sidoo kale sheegay in uu si weyn u taageersan yahay Musharaxnimada Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Dr Cabdullaahi Sheekh Daahir ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbedel aysana suuragal ahayn madaxda xiligaan oo waxqabadkooda la arkay inuu aad u yar yahay markale lagu tijaabiyo xukunka isaga oo sheegay in umadda Soomaaliyeed ay leedahay aqoonyahano badan oo dalka ka saari kara dhibaatada iyo colaadaha uu ku jirey 22-dii sano oo lasoo dhaafay dadkaasina uu ka mid yahay Musharaxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Sikastaba ha ahaatee munaasabada 1-da Luuliyo ayaa xalay ilaa maanta dalka gudihiisa iyo dibadiisaba aad loga xasay iyadoo soomaalida aad moodo in ay wadaniyadii dib usoo laabanayso.